Ihe ị ga-eme na Tenerife | Akụkọ Njem
Mariela Carril | | Ihe ị ga-ahụ, Tenerife
Kedu maka imara Tenerife taa? Anyi na-amalite izu site na nke kachasị n’ime asaa Canary Islands, a nnukwu njem njem Ọ bụrụ na-amasị gị okike, ọ na-anabata ndị ọbịa n'ime afọ niile.
Taa, isiokwu anyị ga-abụ maka ihe ị ga-eme na Tenerife.
2 Gịnị na-ahụ na Tenerife
Dị ka anyị kwuru Tenerife Ọ bụ agwaetiti kacha ibu na otu n’ime ndị mmadụ bi na Canaries. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu nde ndị bi na-ebi ebe a, mana kwa afọ a na-agbakwunye ọtụtụ nde ndị njem dịka ọ bụ, na-enweghị mgbagha, otu n'ime njem nleta kachasị ewu ewu na Spain, ma ọ bụrụ na ọ bụghị nke kachasị ewu ewu.
Enwere ọdụ ụgbọelu abụọ, South na North, na isi obodo ya bu Santa Cruz de Tenerife. Agwaetiti a bụ nsonaazụ nke njikọta ahụ, ọtụtụ nde afọ gara aga, nke agwaetiti atọ bụ ndị mepụtara n'oge ụfọdụ site na omimi nke Atlantic wee were ọnọdụ site na ọrụ mgbawa. A) Ee, Ọ nwere ọdịdị ala dị iche icheSite n'ugwu di elu (ugwu kachasi elu na Spain di ebe a, Ugwu Teide), rue osimiri di iche iche di egwu, nke na-egbuke egbuke n'anwu.
Gịnị na-ahụ na Tenerife
Nke mbu, isi obodo. Obodo dị mma mgbe niile. Santa Cruz Ọ dị na oke ọwụwa anyanwụ nke Tenerife ma nwee otu ọdụ ụgbọ mmiri kacha ochie na Atlantic Ocean. Site na ebe a ọtụtụ ụgbọ mmiri hapụrụ America ma mepụta ngwa ngwa na narị afọ nke XNUMX. Taa ọ bụ nnukwu obodo na ọdụ ụgbọ mmiri anaghịzi ahapụ ndị njem ma ọ bụ ndị kwabatara, mana njem ụgbọ mmiri na-aga Caribbean.
Ọ bụrụ na-amasị gị na ife nke ụgbọ ala Enweghị ebe obibi ị nwere ike were nke na-eburu gị gburugburu obodo. Ọ bụ nke usoro elu na ala na-enye gị ohere ịmara ọtụtụ ebe ngosi obodo: Thelọ Nzukọ Alaeze, ndị omeiwu, Mahadum La Laguna, Plaza de España, Plaza de la Candelaria ... Ọ dị mma agagharị ma ọ bụrụ na ịnweghị oge ma ọ bụ na ịchọrọ ile anya tupu ịlaghachi n'ihe ga-amasị gị.
Eziokwu ahụ ọ bụ obodo apụtaghị na ị gaghị agbaga n'ụsọ osimiri. Lee ihe kacha mma Osimiri Las Teresitas, osimiri osimiri ọla edo dị ogologo-kilomita na nkwụ na mmiri dị jụụ na ikuku na-atọ ụtọ. Ọ na-atụle otu n'ime ndị kasị mma osimiri na n'ebe ugwu Tenerife. Ọ dị n'agbata Ugwu Anaga, dịdebere isi obodo ahụ, n'ime obodo San Andrés. Ọ bụrụ na ịmaghị ndị mmadụ, agala na ngwụcha izu mana ọ bụrụ na ị gaa ụbọchị ole na ole echefula ya, ọkachasị ma ọ bụrụ na ị maghị otu Oke osimiri n'ụsọ osimiri Caribbean.
O doro anya na ihe omume kachasị ewu ewu ebe a bụ ejị. N'agbata ọnwa Febụwarị na Machị, obodo ahụ na-adị ndụ ruo ọtụtụ izu, ọ na-ejupụta na ndị mmadụ na-emegharị, enwere parades na ịgba egwu abalị niile yana enweghị obi abụọ ọ na-atọ ụtọ maka ndị dị ndị otu.
Mgbe Santa Cruz bụ Maska. Ọ bụ ebe mara mma ugwu ugwu ọdịda anyanwụ nke Ugwu Teno. Ọ bụ a obodo mara mma O nwere ike isiri gị ike iru ma ọ ga-abara ya uru maka mbọ ahụ. Osimiri dị omimi, ahịhịa ndụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, ebe mara mma nke na-ewepụ ume gị. Ka anyị kwuo na ọ bụ kpokọtara ebe. Ije ije ihe dị ka awa atọ site na obodo ị ga-erute Bay nke Masca ma ebe ahụ ị nwere ọnọdụ ọzọ dị egwu.
Site n'ọnụ mmiri ị nwere nhọrọ abụọ ịlaghachi, ma ọ bụ laghachi azụ, nke siri ike, ma ọ bụ buru ụgbọ mmiri Ebee. E nwere nnukwu ọnụ ọnụ ugwu dị iche iche, ndị Refeyim, mmiri ọkụ, nnukwu ọnụ ọnụ ugwu na obodo larịị nke nwere marina, ụlọ oriri na ọ barsụ andụ na ogwe ndị dị n'oké osimiri turquoise. Mma? N'ezie.
Eziokwu bụ na Tenerife nwere ọtụtụ ụzọ gasị, ma ị batara nchịkwa ma ọ bụ gbazite otu dị ka ọ masịrị gị agba ịnyịnya. Na weebụsaịtị n'onwe ya, a na-enye gị ụzọ ndị gụnyere gụnyere ịgagharị n'oké ọhịa pine, Camino de Santiago, njikọta n'etiti oké osimiri na ugwu, ubi vaịn, mmepụta mmanụ a ,ụ, nke na-agafe ụlọ, nke ọzọ na n'oge ụfọdụ n'afọ na-agafe almọnd. osisi na ifuru, uzo nke ulo ihe ngosi nka na uzo uzo ihe omuma ...
Touring Tenerife ị ga-abịa gafee ọtụtụ echiche: Archipenque, Ayosa, Baracán, Chivisaya, Cruz de Hilda, El Boquerón, echiche Cumbres del Norte, echiche Cruz del Carmen.
Gịnị osimiri ka anyị nwere ike ikwu na Tenerife? Ọfọn e nwere osimiri aja aja nakwa nke aja ojii. Enwere Playa Jardín Complex, ya na Playa Chica na Punta Brava, ebe a ma ama na Puerto de la Cruz ma gbaa gburugburu. Osimiri dị jụụ bụ Alabama Beach nke dị n'akụkụ ụlọ nkwari akụ: mmiri dị jụụ, ájá ọlaedo, n'akụkụ ugwu, nke yiri shei na ebe kachasị mma iji tufuo anya gị mgbe anyanwụ dara.
Osimiri ndị ọzọ bụ Osimiri Ajabo, nke aja ojii, na Osimiri Alcalá, nke Almáciga, nke ahụ Osimiri Antequera, zoro ezo ma sie ike ịnweta na ụkwụ, Osimiri Areniscma ọ bụ, El Bobo Beach, na ndịda nke agwaetiti ahụ, zuru ezu ma na-enye aka Osimiri El Camisón, na maa mma na ndịda Playa de El Médano, na Osimiri El Socorro, dị mma maka ndị surfers, La Arena Beach, nwa na gravel, La Jaquita, La Pinta ma ọ bụ La Nea, nke obosara ya dị mita 25 na ogologo nke 210 mita.
Enwere ọtụtụ osimiri ndị ọzọ, ọ dabere na akụkụ nke agwaetiti ahụ ị na-akwaga ma ọ bụ ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ ịga leta ya. N'ịga n'ihu n'ụdị Tenerife ị nweghị ike ịhapụ ya Ogige Ntụrụndụ Teide, Ihe Nketa Worldwa. Ọ bụ ihe atụ nke mgbawa ugwu, bụ ebe ọdịda akarị nwere, dị ka anyị kwuru n'elu, elu kasị elu na Spain na mita 3718s E nwere ọtụtụ narị cones, ọgba, iyi, caldera na Tedie-Pico Viejo stratovolcano, nke pụrụ iche n’ụwa.
Ogige ahụ nwere 19 puku hectare, buru ibu. Nwere ike iji bọs si Puerto de la Cruz ma ọ bụ site na Costa Adeje ma ọ bụ ụgbọ ala rute ebe ahụ. Ọ bụrụ n’ịga ụgbọ ala, ọ ka mma n’ihi na ị nwere ike ịga njem n’ogige ahụ dum ma ụzọ kachasị mma bụ ịgbago otu ụzọ wee gbadata nke ọzọ. The Teide ndagwurugwu na-etolite 17 mita dayameta caldera na ebe ị na-ahụ Ọnụ ọgụgụ kasị elu nke Teide ya mara mma 3718 mita, ịdị nke atọ ugwu mgbawa n'ụwa.
I nwekwara ike jiri ụgbọ ala USB, yana ọdụ ọdụ na elu nke 2.356 mita na ọnụ ya na 3.555 mita. N’agbata otu na nke ọzọ enwere nkeji asatọ ma ọ bụ ụgbọ elu na-adọrọ mmasị. Si na ọnụ gị nwere ike ịga n'ihu a ụzọ na-ahapụ gị na ndagwurugwu. Ọ ga-aga ije 40 nkeji ma ọ dịghị mfe mana echiche nke agwaetiti na oke osimiri kwesịrị ya. N'ezie, ịnweghị ike ịmalite njem dị ka nke ahụ ma ị ga-etinye akwụkwọ maka ikike pụrụ iche na ogige mba, n'ịntanetị na tupu oge eruo. Don't naghị akwụ ụgwọ maka ya mana ị ga-enyerịrị ụbọchị.
N'ime ogige ahụ enwere netwọkụ nke ụzọ ụkwụ, ụzọ na-eduzi onwe gị, ma ọ bụ site na nduzi nke ndị ọkachamara kwa ụbọchị ma e wezụga ụbọchị ndị a: Disemba 25 na Jenụwarị 1 na 6. Szọ ndị ahụ dịgasị iche na ụzọ na ihe isi ike ka ị wee mata ikike gị.
Ihe ọzọ ị ga - eme bụ gaa na IAC (Instituto Astrofísico de Canarias). Companylọ ọrụ Volcano Life na-enye njem nlegharị anya n'ọtụtụ asụsụ. Ebe ndoputa bu na ntanetị. Ọzọkwa n'ime ogige bụ Ogige Botanical.
Ọ bụrụ n'ịchọrọ itinye akụkọ ihe mere eme mgbe ahụ ị nwere ike mata ebe akụkọ ihe mere eme nke obodo na obodo dị iche iche nke agwaetiti ahụ: etiti akụkọ ihe mere eme nke Garachico, Buenavista del Norte, Arona, Guía de Isora, etiti akụkọ ihe mere eme nke Güimar ma ọ bụ Icod de los Vinos, na m na-adalata n'ihi na enwere ọtụtụ obodo na obodo ndị obi akụkọ ihe mere eme mara mma. Ọzọkwa enwere ụlọ ngosi ihe mgbe ochie ya mere na ị pụrụ ịhụ, Tenerife nwere a bit nke ihe niile.
Dịka ị pụrụ ịhụ, onweghi onye ga-agwụ ike na Tenerife.